Ná ngwụsị nke Agha Ụwa nke Abụọ, n'oge agha-agha, ihe ụmụ nwanyị adịghị dịgasị iche nke ụmụ nwoke. Ma ugbu a n'ime afọ 50, uwe ụmụ nwanyị malitere ịchọ mma, sexy, nwanyị. Ihe mbụ na-emetụta mgbanwe ndị dị otú ahụ bụ ejiji nke gosipụtara mkparị, ịdị mma na aghụghọ nke ọnụ ọgụgụ ahụ, si otú ahụ na-egosipụta fragility na nro nke ụkpụrụ nwanyi. Taa, uwe ejiji nke afọ 50 abụghị ụdị dị iche na ụdị nke oge ahụ, n'ihi na ụdị a ghọrọ kpochapụ.
Uwe ejiji nke iri afọ ise
Uwe nke afo iri ise bu uwe di mma, uwe elu ya, uwe doro anya nke akara aka nke ikpu obi. Ihe kachasị mma nke ụdị ndị a bụ ụdị "hourglass". Uwe a - njirimara nke femininity na ngosipụta ya nile. Oghere na-agafe agafe nke okpokoro ahụ, jiri nwayọọ na-agbanye n'ime uwe dị mma nke na-etinye aka n'úkwù, n'ụzọ zuru oke. N'ihe eji ejiji eji ejiji ihe dị ka afọ 50, ụda mgbịrịgba ahụ na-agbadata n'úkwù dị nso n'úkwù, nke na-eme ka eriri ahụ dịkwuo ụda. Ọdịdị a ga - eme ka ọ bụrụ naanị onye nwe ya mma, mana ọ ga - ezokarị ihe ọ bụla dị na hips.
Uwe a na-adị kwa ụbọchị na ụdị 50 nke afọ 50 nwekwara ụdị anụ ahụ dị iche iche. Mmiri na-acha ọcha, silk ma ọ bụ linin na-adọrọ adọrọ na ejiji, ihe ndozi ndị ọzọ, ngwa mma.
Ụdị nke iri afọ ise na-edozi anya na ụdị uwe ejiji ejiji. Uwe mgbede nke afọ 50 bụ, nke mbụ, ihe na-emesi ike n'ubu na mpaghara decolleté. Ọtụtụ mgbe a na-eji akwa na-enweghị aka ma ọ bụ nnukwu olu olu na-eji ejiji ndị a eme ihe, nke na-enwekarị oval mara mma. Echiche a n'ụzọ zuru oke na-enye gị ohere igosi ọla na olu gị. Akwa uwe nke ndị 50 na ụzọ si dị iche iche site na akwa uwe. Ejiri tulle n'okpuru satin mara mma ma ọ bụ ihe ịchọ mma ọ bụla ọzọ na-enye gị ohere ịmepụta ihe oyiyi kachasị echefu na nke pụrụ iche.
Kedu ihe ị ga-eyi uwe elu uwe?
Kedu uwe na-ekpo ọkụ kacha mma?
Ihe ngosi mara mma nke uwe
Kedu otu esi eji akwa ụfụ na uwe?
Kedu ihe ị ga-eji akwa jaket aja aja?
Ogologo uwe mwụda
Kedu ndị bụ ndị ọhụụ?
Kedu ihe ị ga-eyi akpụkpọ ụkwụ?
Ọgwụ nje maka oria ogwu
Akpụ Skin-okpu - onye onye na-agwọ ọrịa kwesịrị ekwesị, na otu esi etinye ya n'ọrụ n'ụzọ ziri ezi?
Esi ofe na croutons
Uwe umunwanyi 2014
Ogologo ụbọchị ole ka ụmụaka na-ata ahụhụ site na chickenpox?
Oatmeal na banana
32 foto na-agba gị ume ịma mgbe ịkwụsị
Kedu ihe bara uru maka akụrụ?
Mmanụ Elie Saab
Hotels na Brugge
Mmeputakwa nke mkpụrụ vaịn site n'ígwé
Mmasị ihu n'ụlọ
Kedu ihe a na-apụghị ime n'oge Nwụrụ Ọmụmụ nke Virgin Virginie?
30 alpaca, nke mimicry nke na-enwe anyaụfụ nwamba niile!
Kpochapu na ọka
Ọrịa nwa na-aṅụ ara
Ihe ndị na-eche na Betadine
Ozokerite - eji ulo
Nwunye maka ụmụ ọhụrụ